Ziyanda izakhamuzi Russian makudle izitolo angaphandle, ukuthi ndlela kuyaqondakala ngoba ukuthenga nabo neminye imikhiqizo, ungakwazi kakhulu uyosindisa kokubili ngesikhathi yokuthengisa, futhi ngenxa umehluko intengo. Into kuphela ukuthi kuphazamiseke umsebenzisi - kuyinto ukungakwazi ukubeka umyalelo ngokuqondile, kodwa inkinga isixazululekile ngokuphelele.
Inkampani American Shipito ungaphakathi California futhi njengoba enye yezindawo ezinkulu kakhulu phakathi kwalabo ukunikeza izinkonzo kwemeyili ezaziwayo. Ibhizinisi umqondo ukusungula inhlangano enjalo e-United States ezingaphezu kuka okunengqondo, ngoba iningi izitolo lapho musa afeze imikhumbi yamazwe ngamazwe ukuba, futhi okuwukuphela kwendlela ukwenza ukuthenga - faka ikheli le-e-United States, okwakwenza kube lula ukuthola amabhizinisi efanayo.
Sekuyisikhathi eside abaningi esetshenziswa amasevisi yenkampani, kanti abanye babengakholelwa alinge ukwenza ukuthenga ngokusebenzisa Shipito, ukubuyekezwa zazo ngezinye izikhathi ube isetshenziswe ngomqondo ongathandeki kakhulu. Futhi ingabe kunengqondo ukuthola inkampani okungenani eyodwa, abakhulumayo kuphela njengoba ezinhle? Kungenzeka, ukuthi akathandi enganakile ukuqonda inqubo yakha ukwesaba okudalwa ukungazi.
Ukuthenga nge Shipito - nanokuthi libukeka
Ngokuvamile, kwezinye izindawo ezimbili eziyinhloko yomsebenzi :
akunika ikheli lapho oda ezithunyelwa kusuka eU.S. ezitolo, futhi lokuthumela ukuba amakhasimende, kungakhathaliseki ukuthi bahlala kuliphi izwe;
amasevisi Brokerage, okuyinto aqukethe ekwenzeni ukuthenga ngaso isicelo ikhasimende futhi ukuletha oda yakhe.
Esimweni sokuqala, iklayenti okhokhela kuphela isevisi ukunikeza ikheli kanye izindleko zokuthumela, wesibili sengezwe oda izimpahla egameni amaklayenti.
Kunoma ikuphi, ukuze uqalise udinga ubhalisa kwisayithi. Ukuze kube lula abasebenzisi ukusuka emazweni ahlukahlukene, ungakhetha omunye izilimi esibonakalayo eziningana, kuhlanganise Russian. Phakathi yokubhalisa Iklayenti uthola ulwazi ikheli e-United States, lapho kuyodingeka ukuthi icaciswe lapho iyala ezitolo.
Izinkampani eziningi ehilelekile ukulethwa, ukuhlinzekela ivolumu Shipito izaphulelo, ukuze umsebenzisi ekupheleni izindleko zalo ngeke kunaleyo uma isikhalazo ukuze inkampani leposi ngqo.
Shipito - umyalelo ukubhalisa
Ngaphambi kokungena ngemvume, kubalulekile ukuthola ncamashí ukuhlelwa, kangaki kuyodingeka amasevisi Shipito. Izibuyekezo ngalolu daba ziyahlukahluka kakhulu, ukukhokha ekuthunyelweni yesikhathi esisodwa, ngakho uyakuthanda yezitolo, bese-ke wazuza ukubhaliswa isevisi nyangazonke noma yonyaka. Amasevisi ethola nokuthumela amaphasela kungenziwa ukhokhelwe oda elandelayo:
inkonzo yesikhathi esisodwa;
Ukubhaliswa isikhathi esingaphezu konyaka.
Ukuze labo abahlela ngokuphindaphindiwe ukuthenga, kunengqondo ukucabangela okubhaliselwe, esimweni ukuthenga inkundla yamakheli oxhumano okuyinto olunikezwa imali esithile esinqunyiwe, futhi imali for iphasela ngalinye bezofika ke kakhulu ngaphansana esimweni isevisi olulodwa. Buhle kulolu hlobo lwenkonzo yikhono ukuthola izinsizakalo ukuhlanganisa amaphasela amaningi zibe munye ezingaba kakhulu ukunciphisa izindleko isamba lokuthumela. Ukukhethwa kwe-tariff elilungile kuyoba isinyathelo sokuqala ukubhaliswa.
Ukuze wenze i-akhawunti, aludingi imizuzu engaphezu kweyishumi ziqhubeka. Eyesibili ensimini, lapho umsebenzisi ungena - idatha yomuntu siqu ikhasimende (igama, izwe, e-mail kanye nekheli lokuposa, inombolo yocingo). Ukungeza ulwazi idatha Kwenziwa zesi-Latin. Ngokulandelayo, kuyodingeka ukuqinisekisa ngokunemba kukhethwa tariff futhi ulwazi wangena.
Okwesithathu, izinyathelo ezidingekayo - inkomba yokuthi indlela yokukhokha (credit card, imali oda noma PayPal) nedatha yayo (in the case of ikhadi Kufanele ufake inombolo yayo, usuku lokuphelelwa yisikhathi, ikhodi yokuphepha, njalo njalo). Ngemva kwalokho, kuyodingeka ukuba akhokhe intela esikhethiwe, futhi ngokushesha ngemva kokusebenzisa amasevisi kokuthola akhawunti yokukhokha izoqaliswa.
Shipito - impendulo ku
Njengoba sekushiwo, ukhuluma ngani izinkampani ezahlukene. Othile eminyakeni embalwa ukusetshenziswa amasevisi zayo kanye ujabula kakhulu kokubili izinga lenkonzo (ulwazi mayelana nazo zonke izenzo nge kwesisekelo, ukulungiselela ngokushesha nesivinini Dispatch ukuze uthole izimpendulo zemibuzo kanye nezixazululo kwenzinye izingxabano). Kuzoba ayebatshele zona kokungathathi hlangothi, futhi omubi ngokumelene Shipito. Impendulo kusuka kubasebenzisi abathi yimuphi ngaphezulu ukuthi ngeke ihlobane ne inkampani ngenxa yokuthi abasebenzi bayo ebiwe amaphasela, okuningi okufana umsebenzi izimbangi abangathembekile.
Asinakusho ukuthi inkonzo Shipito - indlela kuphela ukuthola izimpahla ezivela US izitolo, inkonzo efuze leyo ukuhlinzeka izinkampani ShopFan VIAddress. Kunoma ikuphi, kukhona lokuzikhethela phakathi ethenga phesheya noma cha, kanye phakathi izinkampani ezihlinzeka amasevisi ukudlulisela usizo ngenkathi yezitolo.
Amasevisi Legal: imisebenzi Yokunika Ilayisense kanye izakhiwo
Umsebenzi Project: ukusebenza incike ezishintshayo inqubo
Telman ismailov. Biography of usomabhizinisi oqavile
Folk Medicine: Amakhambi ukudakwa
Zifakwe emanzini anosawoti iplamu inyama: iresiphi ukupheka. Indlela amanzi okugqumisa plums?
Uwoyela Dry izinwele, ubuso nomzimba: libuyekeza beauticians
Likuphi Khakassia? Zomlando ezikhangayo zemvelo nezamasiko republic